Maxaan sameeyaa haddii aan TPS waxaa dhacayo? | Ogow waxa aad qabto doorashooyin | USAHello
Waa DED ama TPS dhacayo? Ogow waxa aad samayn karto
Waa TPS ama dhacayo DED? Akhri updates ugu dambeeyey ee dhammaan barnaamijyada TPS iyo DED. Raadi macluumaad ku saabsan TPS aad ee dalka. Baro fursadaha aad ka dib markii uu dhacayo TPS.
TPS Soomaaliya ayaa lagu kordhiyay.
TPS for Somalia has been extended for 18 months through September 17, 2021. Hayso hubinta USCIS Somalia webpage wixii faahfaahin ah.
TPS Yemen ayaa lagu kordhiyay.
TPS for Yemen ayaa lagu kordhiyey 18 bilood ilaa Sept. 3, 2021. Hayso hubinta webpage USCIS Yemen wixii faahfaahin ah.
Biil cusub ee Senate Mareykanka maray. Waxay ku siinaysaa Liberian ah ee USA oo la status DED helitaanka deganaansho joogto ah iyo jid wax ka jinsiyadda. Tag ah DED Liberia page wixii faahfaahin ah.
TPS waayo, El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, iyo Sudan, ayaa lagu kordhiyay.
The dowladda Mareykanka daabacay ogeysiis in Register Federaalka. Ogaysiiska ayaa sheegay in TPS waayo, El Salvador, Haiti, Nicaragua, Sudan, Honduras iyo Nepal la kordhiyo ilaa kiisaska maxkamadda TPS ayaa la degeen.
Maxaa loola jeedaa this for haysta TPS?
Haddii aad qabto TPS waayo, El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, ama Sudan, documents TPS aad si toos ah u kordhiyay si ay u January 4, 2021.
Waxaad ka akhrisan kartaa faahfaahinta iyo falanqaynta ka CLINIC more.
1) TPS El Salvador ayaa lagu kordhiyay, sida ay a dowladda dhawaaqay.
Tani waxay ka dhigan tahay in TPS heysata ka El Salvador hadda live awoodo iyo shaqo ee USA yaraan ilaa bisha Janaayo 4, 2021.
2) Garsoore federaalka ah ayaa sheegay in maxkamadaha dawladda joojin kartaa ka soo gabagabeeyay DED Liberia.
Tani waxay ka dhigan tahay in DED Liberia ayaa weli uu ku egyahay dhamaadka on March 20, 2020.
Waxaan u cusbooneysiin doonaa pages our marka waxaan leenahay macluumaad dheeraad ah.
update August 1, 2019: TPS Suuriya ayaa lagu kordhiyey 18 bilood.
Maanta Department of Homeland Security kordhiyay TPS Suuriya siddeed iyo toban bilood ka September 30, 2019. Eeg TPS Suuriya wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku.
update June 2019: Waalidiinta carruurta leh ee barnaamijka Cam ah waa in ay qaataan warqad ka socota Dowladda Maraykanka.
Ma waxaad tahay qof ka Honduras, El Salvador iyo Guatemala oo ahaa codsigaaga Barnaamijka Caruurta American Dhexe (Cam) keeneysa la ansixiyay? Ma qabtaa weli wax sharci ee USA? Dawladda ayaa laga bilaabo si loo eego codsiyada Cam ansixiyay. Dawladda ayaa soo diraya warqad sidan waalidiinta kuwaas oo keeneysa la ansixiyay Cam. Haddii aad aaminsan tahay weli aad u qalanto iyo ma helin warqaddii, IRAP kaa caawin kara. Read macluumaad ku saabsan Cam ka IRAP iyo hesho macluumaadka xiriirka ee IRAP.
Wac Khadadka Cam wixii macluumaad ah ee ku:
Ama email caawimo: info@menoresCAM.com
update May 2019: Maxaad dowladda ku dhawaaqi saabsan Nepal TPS iyo Honduras TPS ee May 2019?
Dawladda ayaa soo saartay a ogeysiis cusub oo ku saabsan May 10, 2019. Dowladda ayaa sheegtay in, “Faa'iideystayaal oo hoos u tilmaamood TPS for Nepal iyo Honduras hayn doonaa TPS ay, in xaaladda TPS qofka aan ka noqday sababtoo ah gaaryo.” ogeysiis Tani waa sababta oo ah go'aan maxkamadeed.
update April 2019: News ku saabsan reer heysata TPS ka Honduras, El Salvador iyo dadka ka Guatemala
April 12, 2019: maxkamada Maraykanka ayaa sheegay in xukuumadda Maraykanka waa in loo farsameeyo carruurta oo la ansixiyey si ay u yimaadaan si ay USA ku hoos Barnaamijka Central American yar ee. Carruurta ayaa soo socda si ay ugu biiraan waalidkood, kuwaas oo inta badan yihiin dadka haysta TPS ka Honduras iyo El Salvador. Laakiin barnaamijka la xiray by dowladda ee 2017, iyo ku dhawaad 2,700 carruur ah ayaa la joojiyay ka socda. amar maxkamadeed wuxuu khuseeyaa oo keliya carruurta hore u ahaa barnaamijka. Barnaamijka waxaa aan qaadan wax codsiyada cusub.
update March 2019: Waa maxay warka ugu dambeeyay ee ku saabsan DED for Liberian ah?
March 28, 2019: Dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in Dib Departure khasabka ah (DED) dadka ka Liberia ayaa lagu kordhiyay ilaa March 30, 2020.
Cusboonaysii February / March 2019: Waa maxay warka ugu dambeeyay ee ku saabsan TPS?
February 28, 2019: Waaxda Homeland Security sheegay TPS ayaa ku meel gaar ah u kordhiyay afar dal. TPS heysata ka El Salvador, Haiti, Sudan iyo Nicaragua heli doonaa waqti dheeraad ah si toos ah in January 2020. kordhin u dhaqmaan waraaqaha oggolaansho shaqo aad u. Read ogeysiis DHS.
March 8, 2019: Waaxda Homeland Security sheegay TPS la kordhiyo South Sudan. Read ogeysiis DHS ku saabsan South Sudan.
March 12, 2019: dawladda ku heshiiyeen in ay dib u dhigto dhamaadka TPS waayo, Honduras iyo Nepal. TPS waayo labadan waddanba ma joogsan doonaan ilaa ogaysiis dambe waxaa la siiyaa. Taariikhda kama dambaysta ah waxay ku xirnaan doontaa natiijada kiiska maxkamadda. Haddii natiijada kiiska maxkamada ogol TPS si loo soo afjaro, Kooxda heysata Nepali iyo Honduran TPS weli heysan doono ugu yaraan 120 maalmood inuu ka tago ka dib markii amarka la siiyey. Waxaan u cusbooneysiin doonaa this page sida ugu dhakhsaha badan waxaan leenahay macluumaad dheeraad ah. Sidoo kale waxaad ka eegi kartaa website USCIS ee lagu dhawaaqayo. Ka eeg wixii ogeysiin cusub USCIS ku saabsan Honduras iyo Nepal halkan.
Maxaa ku dhacay my TPS?
In 2017, Dowladda Maraykanka ayaa sheegay in barnaamijka TPS waxaa si tartiib tartiib ah soo afjaridda. TPS iyo DED dhacayo (darfihiisa) waayo, dadku on taariikhaha kala duwan. Qaar ka mid ah taariikhaha, kuwaas oo laga yaabaa in mar kale la beddelo sabab u ah kiiska maxkamada in aan weli go'aansaday.
Fadlan guji magacyada dalka hoose wixii macluumaad ah oo ku saabsan TPS ee ay dalka iyo wax ku saabsan fursadaha aad. Macluumaadka waa in English iyo turjumay luqadda kuu gaar ah.
TPS waayo, El Salvador ayaa la kordhiyay yaraan ilaa bisha Janaayo 4, 2021.
TPS for Haiti ayaa lagu kordhiyay ilaa ugu yaraan January 4, 2021.
TPS waayo, Honduras ayaa lagu kordhiyay ilaa ugu yaraan January 4, 2021.
DED dadka ka Liberia darafyadiisa on March 30, 2020. Kooxda heysata DED hadda leeyihiin jid wax ka deganaanshaha joogtada ah ee USA.
TPS for Nepal ayaa lagu kordhiyay ilaa ugu yaraan January 4, 2021.
TPS waayo, Nicaragua ayaa lagu kordhiyay ilaa ugu yaraan January 4, 2021.
TPS for South Sudan dhacayo on November 2, 2020.
TPS for Sudan ayaa lagu kordhiyay ilaa ugu yaraan January 4, 2021.
TPS for Syria uu dhacayo on March 31, 2021.
TPS for Yemen dhacayo on September 3, 2021.
Waa maxay tan micnaheedu aniga iyo qoyskeyga, waayo,?
Haddii aad tahay qof haysta TPS ka mid ka mid ah waddamada kor ku xusan, aad ilaalinta dhammaan doontaa on taariikhaha kor ku qoran. Taas macnaheedu waxa weeye waxaad u baahan doontaa in aad bedesho xaaladdaada ama ka tago Maraykanka. Haddii aadan waxba sameyn, aad noqon doontaa nin muhaajir ah sharciga lahayn. Waxaad halis doonaa xiray iyo masaafurinta.
Maxaa ila habboon inaan hadda sameeyaa haddii TPS waxaa dhacayo?
1) Read bogga kor ku xusan in uu yahay oo ku saabsan TPS dalkaaga ama DED.
2) Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa macluumaad online si loo hubiyo in aad ku wargeliyay ku saabsan doorashooyinka.
3) Waxaad ka raadsan kartaa talo sharci oo xirfadle ah oo ku takhasusay socdaalka.
4) Read macluumaad dheeraad ah online:
Samaynta dareen go'aanada maamul ee Status Badbaadin Ku meel gaar: hage degdeg ah ulaha TPS in English, Isbaanish iyo Haitian Creole
Immigrant wargeliyay khayraadka TPS
fursado qabsiga ee dadka qaba TPS iyo dadka TPS dhici doonaa
xaashida macluumaadka CLINIC
Raadso ilaha socdaalka ee bulshada
Fadlan isticmaal our database FindHello inaad eegto urur ee beesha oo ka caawiya arrimaha socdaalka iyo la-talin sharci.
Immigrant Ka Warqab
The database Immigrant Ka Warqab kaloo qorayaa boqolaal ka mid ah ururada, gobolka gobolka, in laga caawiyo muhaajiriinta.
Sida loo caawiyo dadka haysta TPS
Waa maxay Xaaladda Badbaadin Ku meel gaar (TPS)?
TPS bixiyaa ilaalinta dadka ee dalka Mareykanka oo aan si ammaan ah u tegi kartaa dib ugu dhulkooda hooyo. Tani waxay noqon kartaa sababta oo ah isku dhac ama sababta oo ah masiibooyinka dabiiciga ah. TPS khuseysaa dadka qaar ka yimi dalalka toban kaliya.
TPS u ogolaataa dadka inay joogto dalka Mareykanka iyo shaqeeyaan si sharci ah, laakiin ma aha mid iyaga siin dhalashada ama kaarka cagaaran. Kooxda heysata TPS joogi kartaa ugu yaraan lix bilood. Qaar ka mid ah dadka haysta TPS ayaa la ogol yahay in uu sii joogo muddo ka badan toban sano.
Isbahaysiga Immigration diimaha The (IIC) waa iskaashi ka mid ah ururada diinta ku salaysan ka go'an in ay dib u habaynta waaxda socdaalka in soo dhaweeyay oo dhan oo cusub oo daawaynaya aadanaha oo dhan si sharaf iyo xushmad. xubnaha wada shaqeeyaan si ay u doodo siyaasadaha cadaalad iyo sinnaan ah socdaalka, baro bulshooyinka iimaanka, oo aad u adeegtaan dadka soo galootiga ah ee wadanka oo dhan.
Tag ah IIC website si aad u ogaato siyaabaha aad qaadi karto tallaabo ay ku caawin difaaco TPS. Waxaad ku caawin kartaa heysata TPS ee beesha iyo guud ahaan Maraykanka.
Sida loo helo ilaha sharci oo bilaash ah iyo caawimo socdaalka
Macluumaadka on this page ka timaadaa Department of Homeland Security, ka Register Federaalka, USCIS oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.